Who were Bengali, so called Rohingya?: မာ့ခ် ဖာမနာ (Mark Farmaner) ၏ ဖြေရှင်းချက်အား သုံးသပ်ခြင်း
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 8:04 PM
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ့ အခွင့်အရေး၊
Religious Supression စတဲ့ ရှိသမျှအခွင့်အရေးတွေ အားလုံးကို ကန်ထရိုက်ဆွဲပြီး သိမ်းကြုံးချိုးဖေါက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ
အခြားဟုတ်ပါရောလား။ ဆော်ဒီ ၊ အီရန်၊ နဲ့ ရှရီးယားမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေပေါ့။
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ လူနည်းစု အဖြစ်နဲ့ နေရတဲ့ လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေရဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရမှုတွေ ဟာ Super Computer အကုန်ပေါင်းရင်တောင် ရေတွက်လို့ မလောက်ပါဘူး။
ဒီလို လူ့ အခွင့်အရေး၊ ဂေးလ်အခွင့်အရေး၊ နွားအခွင့်အရေး၊ ၀က်အခွင့်အရေး၊ ရှိသမျှအခွင့်အရေးတွေ အားလုံးကို ကန်ထရိုက်ဆွဲပြီး သိမ်းကြုံးချိုးဖေါက်နေတဲ့ ဆော်ဒီ ၊ အီရန်၊ နဲ့ ရှရီးယားမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေကိုတော့ Mark Farmaner ဘာလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မဝေဖန်ရဲပါလိမ့်။
တကယ်တမ်းသာ သာတူညီမျှလူ့ အခွင့်အရေးတွေ အတွက် Mark Farmaner အလုပ်လုပ်နေတာဆိုရင် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေရဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေကိ်ု ကြေညာလိုက်စမ်းပါ။
လိင်တူဆက်ဆံသူတွေ ကို ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ လည်လှီးသတ်တာ Mark Farmaner ကြားဖူးသလဲ
ကလေးသူငယ်မိန်းကလေးငယ်လေးတွေ ကို ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ တရားဝင် လိင်ဆက်ဆံခွင့်ပြုထားလဲ
အမျိုးသမီးတွေကို ဘယ်နိုင်ငံတွေ မှာ ကားတောင် မောင်းခွင့်မရပဲ သဘာဝ အလှအပကို ပြုချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘ၀ ကို ဆန့် ကျင်ပြီး ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ခေါင်းမြီးခြုံခိုင်းပြီး စုန်းမကြီးတွေပုံစံ နှိပ်ကွပ်ထားလဲ
မရှိဆင်းရဲသား သူခိုးကို တရားဝင်ဥပဒေအရ လက်ဖြတ်ပစ်လဲ
အမျိုးသမီးတွေကို ဖေါက်ပြန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ရင် ကျောက်တုံးကြီးတွေ နဲ့ ဦးခေါင်းကို ထုသတ်တာ ဘယ်နိုင်ငံတွေလည်း
Shame on you Burma Campaign UK. Ohhh! I'm sorry.
Burma Islamic Campaign UK :)